Redi redirịba! Na-azụ Pokémon GO Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ijeri dollar 2 ❤️ GOLUEGO.COM
emelitere ikpeazụ Ọnwa Mbụ 12, 2021
Ọ bụ ezie na 2020 bụ afọ dị ukwuu maka egwuregwu vidio n'ozuzu, nke a abụghị maka ndị na-apụta maka eziokwu ha na-abawanye; Otú ọ dị, nchịkọta nke Pokémon GO ọ nwetara ọnụ ọgụgụ nke mmadụ ole na ole ga-echetụ n'echiche ga-eruba n 'ụlọnga nke a manyere anyị niile ime.
Nke a gosipụtara etu atụmatụ ahụ siri dị irè Niantic ka ọ ghara ịda n'afọ gara aga.
Ọbụna, n'agbanyeghị mgbochi ndị ka dị n'ọtụtụ ụwa, ndị mmepe nwere obi ike iwetara anyị pokémon ọhụrụ ma nye anyị ọganihu dị egwu karịa iji nye anyị ahụmịhe egwuregwu ọhụụ.
Ego ole bụ nchịkọta nke Pokémon GO?
Dị ka data ekpughere site na akụkọ ụlọ ọrụ nke ụlọ ọrụ kwa afọ Superdata, nchịkọta Pokémon Go Ọ bụ $ 1920, naanị $ 1000 ​​ijeri na-erughị afọ gara aga.
Ọ bụ ezie na ọ nwere ike ịdị ka nnukwu mfu, eziokwu bụ na ọ bụrụ na anyị echeta nke ahụ Pokémon GO bụ egwuregwu emere maka ndị ọrụ ya ka ha nọrọ n’èzí na-ejide ụdị, ọ jọghị njọ.
N'ezie, dịka otu akụkọ ahụ si kwuo, ngwa nke Niantic mepụtara bụ nke ise kachasị baa uru na egwuregwu mkpanaka, na-ada n'azụ Honor of Kings, Peacekeeper Elite, Free Fire y Roblox.
N'otu aka ahụ, ọ bụghị ebe nlelị maka Pokémon.
Pokémon GO na 2021
Ebumnuche nke Niantic nwere maka afọ a amabeghị nke ọma, mana ihe anyị maara bụ na a gaghị agbakwunye ọtụtụ Pokémon nke Ọgbọ nke isii.
Tụkwasị na nke ahụ, na njedebe nke February na ihe omume Tour Kanto ga-abata, iji mee ememme 25 nke Pokémon.
N'ime ihe omume a, anyị ga - ahọrọ n'etiti "nsụgharị" na - acha uhie uhie na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ iji nweta ụdị dị iche iche a ga - esi kesaa n'etiti nsụgharị abụọ a, si otú a na - echeta otu esi akpọ ya n'oge ahụ mgbe anyị ga - ejikọ eriri njikọ na Egwuregwu Egwuregwu enyi. inwe ike ịgbanwe pokémon naanị.
Ọ bụ ebe a! Otu Punch Man Ime Anwansi Roulette
Ganyu na akụkọ mgbe ochie Sinae Unicornis bịara Genshin Impact finalmente
Ọnwa Mbụ 20, 2021